ကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်း - WorldRef
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေသအလိုက် ထုတ်လုပ်ရေး Solutions
Value Chain စီမံခန့်ခွဲမှု
အာရှပစိဖိတ်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်း ၂၅ ခုတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအရည်အသွေးမြင့်မား။ စီးပွားရေးအရသဘောတူစာချုပ်များကိုရှာဖွေပါ။
WorldRef သည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ၂၀ ကျော်တွင်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နိုင်ငံများမှရွေးချယ်စရာများကိုသယ်ဆောင်လာသည်။
turnkey ကုန်ထုတ်လုပ်မှု Solutions
ကုန်ကြမ်းအရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းမှနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များအထိကုန်ချောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို outsource လုပ်ရန်သင့်တော်သောသော့ခလောက်ဖြေရှင်းချက်များ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုဒ်များ & စံချိန်စံညွှန်းများ
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၃ အတွင်း ၆.၆% ကျော်တွင်ကြီးထွားရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ (* ကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်း - ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များ)
အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော Global & Local Contract ထုတ်လုပ်မှုများမှကမ်းလှမ်းချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။
WorldRef သည်သင့်အားအတည်ပြုထားသော Global Service Partners မှအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်
ဒုတိယသမ္မတ၊ PT Asia Pacific Fibers Tbk, အင်ဒိုနီးရှား
အတားအဆီးကိုကျော်လွှားပါ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးချဲ့မှုအတွက် High-Start up ကုန်ကျစရိတ်၏
Business Verification Service အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် IIoT ပလက်ဖောင်းများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁.၆၇ ဘီလီယံမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၂.၄၄ ဘီလီယံအထိရှိလာပြီး ၇ နှစ်အတွင်း CAGR ၄၀% ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ (လူးဝစ်ကိုလံဘတ်စ, Forbes မဂ္ဂဇင်း, 1.67)
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် WorldRef ၏အခန်းကဏ္မှာအဘယ်နည်း။
၀ ယ်သူအနေဖြင့် WorldRef မှတစ်ဆင့်မှာယူသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်
ယခု ၀ န်ဆောင်မှုကိုအာရှရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ.
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်၏ကုဒ်များ၊ စံနှုန်းများ၊ မူဝါဒများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သတ်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ သင်ကူညီနိုင်မလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ဒေသဆိုင်ရာကုဒ်များ & စံချိန်စံညွှန်းများ ဤနေရာတွင်ဝန်ဆောင်မှု
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံး တတိယပါတီစစ်ဆေးခြင်း နှင့် မြန်ဆန် & စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး သင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်ဝန်ဆောင်မှုများ။ သင်တို့သည်လည်းအလွယ်တကူငှားရမ်းနိုင်ပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအင်အား တိကျတဲ့အလုပ်များကိုသည်။
မှန်ကန်သောကန်ထရိုက်တာထုတ်လုပ်သူကိုရှာဖွေရန် WorldRef ကမည်သို့ကူညီနိုင်ကြောင်းရှာဖွေပါ။